Mareykanka oo mudada u kordhiyey Soomaalida ku jooga sharciga KMG – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareykanka oo mudada u kordhiyey Soomaalida ku jooga sharciga KMG
A warsame 2 June 2015 2 June 2015
Mareeg.com: Wasaaradda Amniga Qaranka Maraykanka ayaa ku dhawaaqday in dadka u dhshay Somalia ee sharci la’aanta amma sida ku meelgaarka ah u jooga Maraykanka loo ogolaanayo in sharci ku meel gaar ah loo kordhiyo muddo 18 bilood ah.
Arrinta ayaa saamayn ku yeelanaysa dadka Soomaalida ah ee aan haysn sharciga dalkan Maryaknka.
Xoghayaha aminga qaranka ee Marykanka Jeh Johnson ayaa warsaxaafadeed uu soo saaray waxaa uu ku shaaciyay in dawladda Maraykanku ay ogolaatay in muddo 18 bilood ah loo kordhiyo sharciga ku meel gaar ah ee loo TPS dadka haysta dhalashada Soomaaliga ee ku sugan gudaha Maraykanka.
Sharci-yaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi oo ka hawlgala gobolka Minnesota ugu warramay sharcigan iyo ahmiyadda uu leeyahay
Helista sharcigan ayaa u baahan in la soo buuxiyo codsiyo gaar ah oo loogu talagalay sida uu faahfaahinayo sharci-yaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdullaahi
Tallaabadan ayaa raja badan galinaysa dadka sida ku meel gaadhka ah u joogay Maraykanka
Dawladda Maraykanka ayaa go’aankan ku salaysa xaalaadda ka taagan Somalia oo aan imika saamaxaynin in hay’adaha socdaalka ee Maraykanku ay dadka bila sharciga ah ku celaiyaan wadankoodi ay u dhasheeen.
Kenya: Alshabaab oo ka khudbeeyey toolooyin ka tirsan Mandera
Madaxweyne Xasan oo hal todobaad ka qeygelay caleema saarka labo madaxweyne